Lasan’i Nathaniela ny lokan’ny mpijery | NewsMada
Lasan’i Nathaniela ny lokan’ny mpijery
« Je veux faire un film ». Norombahin-dRandrianomearisoa Nathaniela, tamin’ny alalan’io horonantsary « fiction » io, ny Lokan’ny mpijery, nandritra ny « Festival Rencontres du film court » (RFC) andiany faha-11. Araka izany, ny sanganasan’ity tanora ity no nankafizin’ny olona indrindra tamin’ireo 17 naseho hisafidianan’izy ireo.
Notontosaina omaly, teny amin’ny hotely Carlton Anosy, ny fanolorana ny « Zébu d’or » ho an’i Nathaniela, izay nosoloin’ny rainy tena. Ankoatra ity mari-pankasitrahana mampiavaka ny RFC ity, nahazo tapakilam-piaramanidina avy amin’ny Air France ihany koa izy. Marihina fa hanampy ireo rehetra ireo ny handehanany manatrika ny « Festival Off-courts » any Trouville, amin’ny volana septambra izao.
Fantatra nandritra ity lanonam-panolorana loka ity fa mila tohana ny fanatontosana ny RFC, izay mahatratra 120.000 euros na 456 tapitrisa Ariary, eo ho eo, isan’andiany, izany hoe isan-taona. Mila fanampiana toy izany koa ny tahiry Serasary, enti-manampy amin’ny fanatontosana horonantsary malagasy, izay amidy any ivelany.
Manoloana ireo, manentana ny rehetra (olon-tsotra, fikambanana, orinasa, sns) ny mpikarakara mba hanome izay foiny. Marihina fa hisokatra amin’ny 15 jona ny fisoratana anarana sy ny fandefasana ny vokatra ho an’ireo mpanatontosa sarimihetsika te hahazo tohana avy amin’ny tahiry Serasary.